Matambudziko&Magadzirisiro - Longou International Business(Shanghai) Co., Ltd.
Matambudziko akajairika mukuvaka kwemadziro putty uye mhinduro
Mabhubhu anogadzirwa panguva yekuvaka uye mushure menguva yenguva, pamusoro peiyo putty furo.
① Chigadziko chakanyanya kushata uye kukurumidza kwekukwenya kunokurumidza;
② Iyo putty layer yakanyanyisa kuvakwa kwekutanga, pamusoro pe2.0mm;
③Mvura yemukati mepasi yakakwira zvakanyanya, uye density yakakurisa kana kuti idiki.Nemhaka yokuti ine yakawanda voids uye putty ine hunyoro hwepamusoro, haifemeki, uye mhepo yakavharwa muvharo isina chinhu, iyo isiri nyore kubvisa;
④Mushure menguva yekuvaka, kuputika uye kuputika kunoonekwa pamusoro, zvakanyanya kukonzerwa nekusanganiswa kusina kuenzana.Iyo slurry ine upfu zvidimbu zvakanonoka kunyungudika.Mushure mekuvaka, mvura yakawanda inotorwa uye inoputika kuita kuputika.
① Kana yaonekwa yakawanda inotubukira putty pamusoro, shandisa spatula kupwanya zvakananga mablister madiki, uye shandisa yakakodzera putty kukwenya iyo ine furo pamusoro pedhiri;
② Putty inowanzosanganiswa zvakaenzana, wozorega imire kwemaminitsi gumi, wozoshandisa musanganisi wemagetsi kuisanganisa zvakare woiisa pamadziro;
③Kana paine kuputika pachikamu chechipiri kana chekupedzisira chekuvaka, spatula inofanira kushandiswa kubvisa furo watermark isati yabviswa kuti ive nechokwadi chekuti hapana kuputika kunoitika panzvimbo yeputty;
④Kunyanya madziro akaomarara, kazhinji sarudza gobvu putty seyakadzika zvinhu;
⑤Munharaunda umo rusvingo rwakanyanya kuoma kana mhepo yakasimba uye chiedza chakasimba, kutanga kunyorovesa rusvingo nemvura yakachena sezvinobvira, uye mushure mokunge rusvingo rusina mvura, tsvaira putty layer.
Mushure mekunge kuvaka kwapera uye kuoma, hupfu huchadonha kana huchibatwa nemaoko.
①Nguva yekupukuta yemukati madziro putty poda haina kudzorwa zvakanaka, uye nzvimbo yacho yakaomeswa uye yozopuruzirwa ichave yehupfu;
②Kunze kwemadziro putty poda, kupfekedza kunenge kutetepa, mukupisa kwakanyanya muzhizha, mvura inoputika nekukurumidza, uye iyo yepamusoro haina mvura yakakwana yekurapa, saka zviri nyore kubvisa hupfu;
③Chigadzirwa chinodarika hupenyu hwesherufu, uye simba rekubatanidza riri kudzikira;
④Chigadzirwa chacho chinochengetwa zvisina kunaka, uye simba rekunamatira rinodonha zvakanyanya mushure mekutora unyoro;
⑤Kunyura kwemvura kwakakwira kwechigadziko kunoita kuti putty iome nekukurumidza, uye hapana hunyoro hwakakwana hwekurapa.
Iko kusimba kwechisungo pakati pe putty ne base layer haina kunaka, uye inodonha yakananga kubva pa base layer.
① Rusvingo rwekare rwakatsetseka (senge tempered putty, polyurethane uye mamwe mafuta-base pendi), uye putty poda haina kunamatira kumusoro;
② Rusvingo rutsva rwakakandwa ne template, iyo yepamusoro inotsvedza uye ine yakawanda yekuburitsa agent (waste injini mafuta kana silicone);
③ Pama substrates emapuranga, simbi substrates uye mamwe asiri edhaka substrates (se plywood, shanu-plywood, particle board, solid wood, etc.), putty inokweshwa yakananga, nekuda kwekusiyana kwekuwedzera kwepasi uye chibvumirano, uye zvigadzirwa zvakadaro. kuve nekunyura kwemvura kwakasimba uye kusimba kwemukati madziro putty haigone kukanganiswa pamwe chete nayo, kazhinji inodonha mushure memwedzi mitatu;
④ Iyo putty inopfuura hupenyu hwesherufu uye simba rekubatanidza rinoderera.
① Bvisa peeling layer uye uite nayo zvinoenderana neanotevera mamiriro;
② Polisha madziro ekare kuti uwedzere kushata kwepamusoro, uye wobva washandisa iyo interface mumiriri (10% kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza glue kana yakakosha interface mumiriri);
③ Shandisa degreasing yekuchenesa mumiriri kubvisa iyo yekuburitsa kana zvimwe zvikamu zvegirisi pamusoro, uye wozoisa iyo putty;
④ Shandisa maviri-chikamu kana yakakosha plywood putty pakuvaka;
⑤ Ndokumbira ushandise yakakosha putty yekunze kwemadziro emadziro emarble, mosaic, ceramic tile uye mamwe ekunze madziro.Shandisa mukati me putty sherufu hupenyu.
Pakati pezvikamu zviviri zveputty kana pakati peputty uye substrate bvisana.
① Bvisa peeling layer uye sarudzazve yakakosha putty kukwenya;
② Pazvivakwa zvekuvaka zvine chaki zvakanyanya, zviri nani kushandisa 10% sealing primer diluent yekuisa chisimbiso, uye mushure mekuomesa, ita zvinoenderana ne putty layer kana kumwe kuvaka;
③ Putty, kunyanya yemukati madziro putty, kupfupisa nguva pakati pezvivakwa zviviri zveputty zvakanyanya sezvinobvira;
④ Teerera kudzivirira panguva yekuvaka.Munguva yekuvakwa kweputty kana mukati maawa masere mushure mekuvaka, iyo putty haifanirwe kupinzwa nemvura.
Mushure mekuisa putty kwenguva yakati rebei, nzvimbo yacho yakatsemuka.
① Iyo putty yakatsemuka inoda kubviswa.Kana mutswe usina kunyanyokura, putty inochinjika inogonawo kushandiswa pakuvaka kwekutanga, uye ipapo kuvakwa kuchaitwa zvinoenderana neyakajairwa nzira yekuvaka;
② Chivakwa chega chega hachifanirwe kunge chakakora.Nguva yenguva pakati pezvivakwa zviviri izvi inofanira kunge inopfuura maawa mana.Mushure mekunge putty yepamberi yaomeswa zvachose, kukwenya kumashure kunoitwa.
① Gadzira chigadziko chisati chaoma zvachose, uye kuvaka kunoda kuti hunyoro hwepasi pasi pasi pe10%;
② Iyo pasi putty haina kuomeswa zvachose, ingopfuura kumusoro, iyo yekumusoro yakaomeswa kutanga, uye iyo yemukati yemukati ichiri mukuomeswa, zvichikonzera madhigirii akasiyana eshrinkage pakati pezvikamu uye nyore kuputika;
③ Kana chigadziko chepasi chichigadziriswa, kana kugadzirisa uye kugadzirisa zvinhu zvisina kuoma zvachose, mukati memadziro putty nekuoma kwakasimba inoshandiswa pairi, izvo zviri nyore kukonzera kuputika;
④ Chivakwa chakanyanya kukora, kuomeswa kwemukati kunononoka, kukurumidza kuoma kwepamusoro kunokurumidza, uye zviri nyore kukonzera kuputika.
Mushure mekuvakwa kweputty kwapera, chikamu kana kuti yese ichaonekwa yero munguva pfupi.
Zvinonyanya kuitika pamadziro ekare emukati.Iyo yekare madziro putty inoshandisa yakawanda PVA glue.Nama yacho yasakara uye yakaora kuita unsaturated acid.Iyo unsaturated acid inopindirana ne calcium ions mu putty kuti ibudise inowirirana yellow calcium salt.
①Kupeta kaviri neglue inoshamwaridzana nenharaunda, wobva waisa zvine hushamwari mvura-yakavakirwa mukati memadziro putty mushure mekuoma zvachose;
②Kukungurusa pamajasi maviri ewhite seal primer, wobva wakwenya iyo putty yanyatsooma;
③Shandisa paste putty kuvaka, kana shandisa board putty kuvaka.
Matanho ehunyanzvi ekukunda makatsemuka mumadziro ekupisa kupisa purojekiti
①Kupokana kwekupokana kweiyo anti crack protection layer ndiyo kupokana kukuru, uye yakakosha anti cracking dhaka inofanira kushandiswa uye mambure ekusimbisa anonzwisisika anofanira kutorwa.
Kuwedzera huwandu hwakakodzera hwepolymer uye faibha kudhaka kunoshanda pakudzora kutsemuka.
②Nedhaka rekupurasita uye kuwedzera anti crack protective layer net inoumbwa nehurongwa hwese inoridza yakanyanya kutsoropodza crack resistance.Iyo deformation inofanirwa kuve yakakura kupfuura iyo yakaipisisa-yepamusoro muganho, iyo deformation yeinochinjika tensile dhaka (yakaoma shrinkage deformation, deformation, deformation tembiricha, humidity uye kemikari deformation) uye yekutanga deformation uye inodzivirira layer, kuitira kuve nechokwadi chinodiwa chekutsemuka. resistance crack resistance.Musanganiswa mumatope anosimbisa network (sekushandiswa kwefiberglass mesh jira), kune rimwe divi rinogona zvinobudirira kuwedzera simba rekusimba reiyo anti crack inodzivirira layer, kune rimwe divi, inogona kunyatso kuparadzira kushushikana, inogona kunge iine mitswe yakafara. (kutsemuka) akaparadzirwa mumitswe midiki mizhinji (mitswe) kugadzira anti kutsemuka mhedzisiro.Izvo zvakakosha kune yekutanga alkali yekudzivirira yekuputira zvinhu uye pamusoro yakavharwa pagirazi fiber jira, girazi faibha mhando uye ine yakasarudzika kukosha kune kwenguva refu alkali kuramba.
③Decoration layer yezvishandiso kwete kungotsemuka chete, asiwo inofema (kunyorova) uye neiyo insulation layer kurongeka, zviri nani kusarudza elastic ekunze madziro ekuvhara.
Imwe Interface layer, insulation layer, bonding uye zvekusimbisa zvinhu zvinofanirwawo kupihwa nevagadziri vane hunyanzvi kuti vavandudze kuteedzerwa kwematambudziko emhando.
Sei matiles akagadzirwa achitsemuka?
Kazhinji, pane zvikonzero zvitatu zvekupaza mataira: imwe imhando yematairi pachayo;imwe idambudziko rekugadzira tile paving, uye yechitatu ndiyo base layer uye masimba ekunze.Pazasi isu tichasuma zvikonzero chaizvo zvakadzama:
Mamwe matiles ane mwero wakakwira wekunyura kwemvura uye kusakwana kwekumanikidza kupikisa, izvo zvinoita kuti mataira atsemuka;Mataira haana kupiswa panguva yekupfurwa, uye anotsemuka panguva yekufambisa, kuchengetedza, uye kushandiswa.Hunhu hwetairi pachahwo hunonetsa, uye kuputika kwemavara kunowanzoita mesh-senge, sehukuru hwebvudzi rakanaka, chiyero chekutsemuka chakanyanya kukwirira, uye panogona kuve nekutsemuka kwakawanda mu tile.Mamiriro ezvinhu aya anowanzo kuitika mune zvigadzirwa zvakaderera.
①Simende yepamusoro-giredhi inoshandiswa: Yakajairika Nhamba 425 yakajairika Portland simende inowanzoshandiswa kugadzira mataira.Iko kusanganiswa kwejecha resimende i1: 3.Kana giredhi resimende rakanyanya kukwira, simende inotora mvura yakawanda kana dhaka resimende raoma.Panguva ino, unyoro hwematairi hwakanyanya kunyura, zviri nyore kuputika.Kazhinji, inoratidzwa sematairi akawanda achitsemuka, uye kutungamira kwekupwanya mameseji haawanzo.
②Matairi eCeramic akaiswa pamadhiramu asina mhango anokonzera kuti mataira atsemuke: madhiramu asina maburi uye madhiramu asina mhango, simende dhaka uye mataira eceramic ane akasiyana ekuwedzera coefficients, ayo anoita kuti mataira aderedze uye atsemuke.Kazhinji, kugoverwa kwematairi akatsemuka hakuna kurongeka, uye kuputika hakunawo.Mitswe yacho ine mitsetse uye ine hurefu hwakasiyana.Kurira kwakadzikira, kuzere uye kune madhaka.
③Hapana seams asara mukugadzira, kuwedzera uye kudhonzwa kwematairi eceramic uye base layer hazvienderane, uye kuwedzera kwekupisa uye kuputika kunoita kuti mataira e ceramic atsemuke.Kazhinji, kune kuputika mumakona ematairi, kutsemuka kudiki pamusoro, uye mapfupi mapfupi.
④ Matairi eceramic akatsemuka mushure mekucheka: kuputika kwakasviba kunoumbwa panguva yekucheka.Mushure menguva yakati, mataira eceramic anokanganisa nekuderera kwe simenti uye masimba ekunze.
Base layer uye masimba ekunze
①Wall deformation uye kutsemuka Nekuda kwedambudziko rayo re geological, imwe dhigirii yekudzika ichaitika, izvo zvinokonzeresa kuti madziro aderedze uye kutsemuka uye zvakare kukonzera kuputika kwetairi.Kazhinji inoratidzirwa seanoenderera uye anogara akatsemuka.
②Kupwanya mataira anokonzerwa nekuzunguzika kwemadziro kunokonzerwa nekupwanya madziro
③Iri padyo zvakanyanya kune dzimwe nzvimbo dzekupisa, uye tembiricha inoshanduka nekuda kwekunyanya kutonhora nekupisa, uye kuwedzera kwekupisa uye kudhonzwa kunoita kuti mataira atsemuke.Ichi chiitiko chinowanzoitika mumakicheni, makamuri anopisa, nezvimwe.